11/09/2017 admintriatra 0
Ireo mpankafy ny taranja “rugby” no tena mpampiasa ity hoe “moka fohy” ity, ilazan’izy ireo faharesena, na koa fandresena tamina elanelan’isa tokana monja, ohatra hoe 23/24. Fa na eo aza izany “moka fohy” izany, dia …Tohiny
Mozika Jazz : Nodimandry tany La Réunion i Jeannot Rabeson
Andrarezin’ny mozika jazz. Nodimandry omaly tatsy amin’ny Nosy La Réunion i Jeannot Rabeson, izay fantatra amin’ny fahaizany mitendry piano. Rabeson Jean Bernard no tena anarany, ary nanomboka teo amin’ny faha-8 taonany izy no niditra teo …Tohiny
Tarika Antsan’i Kristy : Nampiakatra ny aingam-panahy ny « Mino Anao…Tiako Ianao »
Tao anatin’ny seho matihanina no nitondran’ny Antsan’i Kristy ny seho fiderana « Mino anao… Tiako Ianao ». Nampiakatra ny aingam-panahin’ireo mpijery maro tonga tetsy amin’ny lapan’ny fanatanjahantena Mahamasina ny nitondran’ireo mpikambana ao amin’ity tarika ity ireo hira …Tohiny
Fifaninanana : Nanohy ny Hira gasy makotrokotroka ry Rasohasimanga sy Raedisaminanana
Mitohy hatrany etsy Ambohijatovo ny fifaninanana Hira gasy. Nanohy indray ny « Hira gasy makotrokotroka », omaly ny tarika Rasohasimanga Berthine Ambohimandroso sy Raedisaminanana Sahavato. Toa ny mahazatra amin’ny hira gasy, misy hatrany ny lohahevitra sy ny …Tohiny
Fianakaviamben’ny Foloalindahy : Mampirisika ny Filoha hampihatra ny “Etat de nécessité nationale”
Tsy hamela ny firenena ho latsaka an-katerena na amin’ny fanaovana takalon’aina na ankivy izahay, hoy ny fanambarana nataon’ny Foloalindahy, notarihin’ny minisitry ny Fiarovam-pirenena Béni Xavier Rasolofonirina, teny Ampahibe ary natrehin’ireo tompon’andraikitra ambony eo anivon’ny mpitandro ...Tohiny
Ihosy : Tafapetraka ny foiben’ireo Kômandô hiady amin’ny dahalo